Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba zeGrenada Breaking » Izindiza eziningi zaseGrenada ezisuka e-USA naseCanada manje
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • ICanada Breaking News • I-Caribbean • Izindaba zeGrenada Breaking • Industry Hospitality Industry • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • I-USA Izindaba Ezintsha
ICaribbean ikhanga kakhulu kubantu baseNyakatho Melika asebevele besaba ubumnyama bokuqala namazinga okushisa abanda kakhulu.
I-Air Canada Mainline izoqala kabusha inkonzo eqondile, kabili ngesonto, (ngoLwesithathu nangeSonto) isuka eToronto Pearson International Airport (YYZ) iye eMaurice Bishop International Airport (GND) eqala ngo-Okthoba 31.
I-JetBlue inikezela ngezinsizakalo zansuku zonke kusuka e-John F. Kennedy Airport (JFK) ukuya e-Maurice Bishop International Airport (GND). Indiza ye-premium yenethiwekhi ethwala iMint isebenza ngoMgqibelo.
I-American Airlines inikezela ngosizo, kabili ngesonto, ukusuka eMiami International Airport (MIA) ukuya eMaurice Bishop International Airport (GND) ngoLwesithathu nangoMgqibelo.
The IGrenada Tourism Authority (GTA) umemezele namuhla ukuthi indawo oya kuyo izotholakala kalula ngokwanda kwezindiza kusuka e-United States kanye nokuqala kabusha kwenkonzo kusuka eCanada. Isikhathi sifika ngaphambi nje kobusika, ngokusemthethweni isikhathi se-SAD nalapho iCaribbean ikhanga kakhulu kubantu baseNyakatho Melika asebevele besaba ubumnyama bokuqala namazinga okushisa abanda kakhulu.
“Njengoba abantu bephinda bezibandakanya nothando lwabo lokuvakasha, ozakwethu bezindiza bayabona ukubaluleka kokunikeza ukuxhumana esiqhingini sethu esikhethekile. Siyisigaxa sepharadesi ngempela esine-vibe esisezingeni eliphansi, abantu abafudumele nabemukelayo, neminikelo exhumanisa izivakashi hhayi nemvelo kuphela nokuzijabulisa okumangalisayo kwamanzi, kodwa futhi nohambo oluthakazelisayo lokupheka ”kusho uPetra Roach, oyi-CEO, IGrenada Tourism Authority. "Insizakalo yomoya entsha futhi enwetshiwe isiza iGrenada ibuyise isikhundla sayo njengendawo ekhangayo kakhulu kubavakashi abafuna ulwazi olwehlukile lwaseCaribbean."
Ukuhlanganiswa kwezibuyekezo zezindiza kufaka:
JetBlue unikezela ngezinsizakalo zansuku zonke kusuka e-John F. Kennedy Airport (JFK) ukuya e-Maurice Bishop International Airport (GND). Indiza ye-premium yenethiwekhi ethwala iMint isebenza ngoMgqibelo.
American Airlines unikezela ngosizo, kabili ngesonto, ukusuka eMiami International Airport (MIA) kuya eMaurice Bishop International Airport (GND) ngoLwesithathu nangoMgqibelo.
Kusukela ngoNovemba 2, isevisi isebenza kathathu ngesonto (ngoLwesithathu, ngoLwesihlanu nangoMgqibelo). Inkonzo yansuku zonke iqala ngoDisemba 1.
Kusukela ngoNovemba 27, insizakalo evela eCharlotte Douglas International Airport (CLT), isebenza kanye ngesonto ngoMgqibelo.
ISunwing kulindeleke ukuthi inikeze insizakalo kanye ngesonto isuka eToronto Pearson International Airport (YYZ) iye eMaurice Bishop International Airport (GND) eqala ngoNovemba 7.
ISri Lanka iyaqhubeka nokukhiya okusha njengoba ukufa kwe-COVID kukhuphuka